Ịre ahịa - Motadata
Maka otu ndị na-ere ahịa
Gbanwee Ụzọ Ndị otu ahịa gị si arụ ọrụ
Jiri Smart Automation na arụrụ arụ arụrụ arụ iji kwalite nrụpụta nke otu azụmaahịa
Ihe ịma aka nke Otu ndị na-ere ahịa
Dị ka Azụmahịa Ọnụ ọgụgụ, Marketing otu na-ekesa ọzọ, na ha na-adị mfe na-erikpu na dị iche iche Arịrịọ n'elu na-eme ihe ha na-eme mgbe nile na imezu mgbasa ozi ahịa. Arịrịọ na-abata site na ọwa dị iche iche dị ka Email, Oku, Platform Communication Business dị ka Slack, ma ọ bụ ọbụna n'ime mmadụ nke a na-ejikarị akwụkwọ mpịakọta Excel ma nwee ike ịghọ ihe siri ike idobe.
Mmụba na nrụpụta
Otu dị iche iche jirila Ngwọta ESM hụ maka ịhazi na arụ ọrụ ire ahịa.
Motadata ServiceOps na-enyere aka njikwa etiti nke ọrụ ahịa iji hụ na ọ na-agbanwe agbanwe, nweta visibiliti ka mma, yana kwalite mmekorita otu.
Ngwọta Motadata ServiceOps maka otu ahia ahia
Nweta ọhụhụ na njikwa maka ọrụ ịre ahịa gị na Motadata ServiceOps
Hazie na megharịa atụmatụ ịre ahịa iji hụ na ọ na-agbanwe agbanwe
Mepụta ọnụ ụzọ etiti etiti iji jikwaa arịrịọ ahịa na-abata maka nzukọ niile wee wepụ mbọ nke ime nchọgharị site na ozi-e na-adịghị agwụ agwụ.
Kwado ndị otu otu ohere ịnweta teknụzụ ịre ahịa dị iche iche site na etiti etiti wee kwalite visibiliti akụrụngwa.
Iji gbasaa na ịhazi ọrụ ahịa, mepụta ọbá akwụkwọ nke akụrụngwa, ihe omume ọma, kaadị azụmahịa, na ihe ndị ọzọ.
Debe onye ọ bụla na akaghị ma kwe nkwa ngbanwe ire ahịa site na ịgbasa ụkpụrụ ụkpụrụ site na portal.
Jiri akpaaka kwalite usoro ịre ahịa gị
Gbanwee site na usoro ntuziaka na akwụkwọ mpịakọta Excel gaa na usoro akpaaka na njikwa tiketi nwere ọgụgụ isi iji melite arụmọrụ otu.
Hazie arịrịọ mbata na-akpaghị aka site n'otu dị iche iche, nye ha ụzọ tupu ụbọchị eruo, ma kenye ha onye otu kwesịrị ekwesị dabere na ọrụ ha nwere.
Nweta foto zuru oke nke arịrịọ mbata, mkpọsa dị adị, na atụmatụ ndị na-abịa n'ihu iji nọgide na-emelite na ọrụ mepere emepe, mmemme ndị metụtara ya na oge oge niile.
Jikwaa ọrụ ịre ahịa n'ụzọ dị mfe yana ịdị mfe
Site na modul njikwa ọrụ arụnyere arụnyere, jikwaa ọrụ ahịa nke ọma, nyochaa ọkwa ọkwa, wee hụ ọrụ na-echere na mepere emepe iji hụ na ọ nweghị arịrịọ eleghara anya.
Jikọta ọnụ n'ofe otu ndị na-arụ ọrụ na mpaghara zuru oke. Nweta nghọta na usoro ịzụ ahịa dị iche iche site na iji akụkọ na-enweghị igbe na dashboards.
Uru maka Otu ndị na-ere ahịa
Jiri Motadata ServiceOps mee ka ọrụ ahịa nwee obere oge na akụrụngwa mebie arụmọrụ ahịa
Mmejuputa akparaghị ókè
Motadata ServiceOps nwere ike ịdị elu ma na-arụ ọrụ n'ime nkeji na-enweghị ntinye koodu, enweghị mmezi, enweghị oge ọdịda yana ọzụzụ pere mpe.
Ikike ịdọrọ na dobe na-enye gị ohere ịhazi ngwa ngwa ITSM anyị iji gboo mkpa nzukọ gị.
Ihe owuwu mepere emepe nke Motadata ServiceOps ikpo okwu na-enye ohere maka njikọta dị mfe na ngwa ndị ọzọ dị ka Slack, Otu, wdg site na REST API.